Ukukhathazeka nokwesaba - Umehluko omkhulu | Bezzia
USusana godoy | 19/06/2022 18:00 | I-Psychology
Nakuba kwezinye izimo zihambisana, uchungechunge lwe umehluko phakathi kokukhathazeka nokwesaba. Ngoba kokubili akufani futhi sekuyisikhathi sokuqala ukuqonda ukuthi kufanele bahlukaniswe nini. Kodwa zingaholela ekudidekeni okukhulu ngokuqondene nemizwa. Uyazi ukuthi ungawahlukanisa kanjani?
Uma sicabanga ngakho, kuyinkimbinkimbi, yebo. Ngoba kuzo zombili izimo lowomuzwa wobuhlungu ungaba khona kukho kokubili ukwesaba nokukhathazeka. Kodwa ngeke sizibheke njengokusabela okufanayo, ngoba miningi imininingwane ebahlukanisayo. Ngakho-ke, thola ngezansi ngakho konke esikuphathele kona.
1 Izisusa ezivusa ukukhathazeka nokwesaba zihlukile
3 Inkulumo ngayinye yazo
4 Isikhathi sokuvela kwayo
5 baphathwa kanjani
Izisusa ezivusa ukukhathazeka nokwesaba zihlukile
Okusho ukuthi, lapho sizwa ukukhathazeka sizokwenza lokho ngenxa yezimo ezingahlangene nokwesaba. Ngakho zenzeka ezindaweni ezahlukene. Ukuze kucace kusukela ekuqaleni, kufanele kushiwo kanjalo ukwesaba kubonakala osukwini lwethu lapho kunengozi ukuphila kwethu okungaba sengozini enkulu ngayo. Uma ubona ingwe igijima ibheke kuwe, uzozwa ukwesaba noma ukwethuka kodwa hhayi ukukhathazeka. Njengoba sizizwa lokhu njengoba usongo, njengento engenzeka kodwa akukenzeki okwamanje, kodwa wathi usongo akusho noma yiluphi uhlobo engozini ekuphileni. Nakuba ngezinye izikhathi kungase kubonakale kunjalo, ngoba kuyiqiniso ukuthi ukukhathazeka kusilethela uchungechunge lwezimpawu ezibonakala ziyingozi kithi kodwa ezisivikela ngempela.
Manje siyazi ukuthi imvelaphi yakho kokubili ayifani, ngakho-ke ukusabela kokuzizwa nakho akufani.. Ngoba lapho sesaba, isenzo sokuqala somzimba siwukubaleka, ukuklabalasa, ngezinye izikhathi sihlale sidabukile, njll. Kodwa ngokukhathazeka, akusizi ukubaleka uma ingqondo yethu ikholelwa ukuthi kunenkinga enkulu. Ngakho-ke, kufanele sibheke leyo nkinga edala imicabango emibi futhi ibe injini yezimpilo zethu. Ngakho, ukusabela kwehluke ngokuphelele.
Inkulumo ngayinye yazo
Kunabantu abaningi abangakwazi ukugwema isimo sobuso babo lapho kukhona okubakhathazayo noma lapho bekuthanda. Okusho ukuthi ngokunyakazisa umzimba bazoqaphela ukuthi banethezekile noma cha. Ngakho, uma umuntu esaba, sisobala kakhulu ukuthi kuzobonakala ebusweni bakhe. Ngoba inkulumo iyisisekelo futhi injalo, yaziwa kahle. Kuthiwa itholakala emhlabeni wonke ngoba emhlabeni wonke wonke umuntu uzoyibonisa ngaphandle kokukhetha. Kodwa ngesikhathi kukhona ukukhathazeka, akukho nkulumo ehlobene nakho.
Isikhathi sokuvela kwayo
Lapho sesaba yingoba kumayelana nalokho kusabela ngokushesha ekusabiseni esinakho phambi kwethu. Kodwa ukukhathazeka akuveli ngokuzumayo ngoba sibhekene nosongo. Ngaphezu kwalokho, kuthiwa ukukhathazeka ngokuvamile kuza ngemva kwesikhathi sokuqongelela izinkinga noma imizwa. Nakuba izovela futhi lapho sikhathazeka kakhulu ngekusasa nangezinto ezingakenzeki. Ngakho-ke, njengoba sibona, izikhathi lapho umuzwa owodwa ungavela futhi omunye usuvele uhlukile.
Ukwelashwa kokukhathazeka nokwesaba nakho kuhlukile. Ngoba esimweni sokwesaba, kungalethwa kuphela ekwelapheni lapho sikhuluma ngama-phobias avimbela impilo yethu evamile. Ngenkathi sikhuluma ngokukhathazeka, njengomthetho ojwayelekile kuzodingeka ube nokwelashwa kwengqondo kanye nokwelashwa kwengqondo, lapho Kuzohlinzekwa uchungechunge lwamasu okuwasebenzisa futhi uzame ukulawula imizwa kanye naleyo micabango lokho kwenza impilo yakho icishe ingenzeki.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » I-Psychology » Umehluko phakathi kokukhathazeka nokwesaba